स्थानीय सरकारको उपहार : अब वाईफाई निशुल्क !
गृहपृष्ठ » समाचार » स्थानीय सरकारको उपहार : अब वाईफाई निशुल्क !
मङ्गलबार ९ असोज, २०७५
रत्ननगर । चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले आजदेखि विभिन्न स्थानमा निःशुल्क वाईफाई सेवा शुरु गरेको छ । सर्वसाधारणलाई इन्टरनेटको पहुँचमा पु¥याउन नगरका मुख्यमुख्य बजार क्षेत्रमा निःशुल्क वाईफाई सेवा शुरु गरेको नगरप्रमुख नारायण वनले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नगरपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यअनुरुप आजदेखि वाईफाईसेवा शुरु गरिएको बताउनुभयो ।
इन्टरनेटको सही सदुपयोग हुनसके बालबालिकाको क्षमता विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश नं ३ का प्रदेशसभा सदस्यद्वय कृष्ण खनाल र कञ्चन खनालले नगरपालिकाले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा गरेको प्रयास महत्वपूर्ण रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । यसैबीच आज रत्ननगर–१० मा रहेको वैरीया माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक शिक्षाको पढाई शुरु गरेको छ । रत्ननगर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सो विद्यालयले पशु विज्ञानको तीनवर्षे स्नातकतहको कक्षा शुरु गरेको हो ।
आज प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र रत्ननगर नगरपालिका प्रमुख नारायण वनले संयुक्त रुपमा प्राविधिक शिक्षाको उद्घाटन गर्नुभयो । यसअघि पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयमा इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियर र जनजागृति माध्यमिक विद्यालयमा सिभिल इञ्जिनियरको पढाई शुरु भइसकेको छ । रासस